China USB Phosphatized Steel Waya maka ngwa anya eriri USB nwee ume factory na suppliers | OTU WORLDWA
Phosphatized Steel Waya maka ngwa anya eriri USB mkwado
Mentkwụ Tergwọ Okwu T / T, L / C, D / P, wdg
Oge Mbuga ozi Daysbọchị 20
Port nke Loading Shanghai, China
Usoro HS 7229909000
Nkwakọ ngwaahịa Katọn ma ọ bụ igbe osisi, 50kg / mkpọ ma ọ bụ dị ka ihe onye ahịa chọrọ si dị
A na-eji waya waya a na-eme ka a na-eme ka eriri waya nke a na-eme ka a na-eji eriri igwe na-acha uhie uhie dị elu site na usoro nke usoro dịka ịbịaru ike, ọgwụgwọ okpomọkụ, pickling, ịsa, phosphating, ihicha, ịbịaru, na iwere, wdg.
Igwe waya nchara nke phosphorized bu otu n’ime ihe eji eme ihe eji eji eriri igwe. Ọ nwere ike ichebe eriri anya site n'ịgbado, kwado ma wusie ọkpọ ahụ ike, nke bara uru maka imepụta, nchekwa na njem nke eriri anya na ntinye nke eriri anya, ma nwee ogo eriri anya, na-ebelata mgbaàmà mgbaàmà na njirimara ndị ọzọ.
Igwe nchara eji eme ihe na isi nke eriri anya ejirila waya waya kpochapu galvanized n'oge gara aga site na waya nchara phosphatized, na ogo ya na-emetụta ndụ nke eriri anya. Ojiji nke waya nchara phosphatized agaghị eji kemịkal na-ete mmanụ na griiz na eriri anya iji kpalie hydrogen ma mepụta ọnwụ hydrogen, nke nwere ike hụ na nkwukọrịta eriri anya dị elu.
The phosphatized ígwè waya maka ngwa anya cable anyị na-enye nwere ndị na-esonụ e ji mara:
1) Elu dị larịị ma dịkwa ọcha, enweghị ntụpọ dịka mgbape, slubs, ogwu, corrosion, bends na scars, wdg;
2) Ihe nkiri phosphating bụ edo, na-aga n'ihu, na-enwu gbaa ma ọ dịghị ada;
3) Ọdịdị dị gburugburu na nke siri ike, ike mgbatị dị elu, nnukwu mgbanwe na-agbanwe, yana obere elongation.
A na-eji ya dị ka isi ihe na-eme ka ígwè na-arụ ọrụ nke ikuku ikuku.
Elu ọnụ (mm)
Nkeji. ike ọdụdọ (N/ mm2)
Nkeji. arọ nke ihe nkiri phosphating (g/ m2)
Mgbanwe mgbanwe (N / mm2)
Fọduru elongation (%)
Mara: Na mgbakwunye na nkọwapụta na tebụl dị n'elu, anyị nwekwara ike ịnye wires nchara phosphatized na nkọwa ndị ọzọ na ike mgbatị dị iche iche dịka ihe ndị ahịa chọrọ si dị.
1) Ekwesiri ịchekwa ya n'ụlọ nkwakọba ihe dị ọcha, ventilated na akọrọ;
2) Ihe nkpuchi nke ala nke ebe a na - edeputa ihe kwesiri ime ka ihe di nkpa mee ka mmiri ghara idi ya;
3) Ekwesịrị ichebe ya pụọ ​​na nrụgide dị arọ, iti ihe na mmebi ndị ọzọ mebiri emebi n'oge nchekwa na njem.
Nke gara aga: Galvanized Steel Waya maka USB Stranding
Osote: Polyester Glass Fiber Mezie
Q1: Anyị nwere ike ịga ụlọ ọrụ gị?
A: anyị na-atụ anya ọbịbịa gị ma anyị ga - eduga gị ka ị gaa na ụlọ ọrụ anyị.
Q2: Kedu otu ngwa ngwa m ga-esi nweta nkwupụta ahụ?
Azịza: Anyị na-aguputa n'ime 24 awa maka nkịtị cable ihe mgbe anyị nwetara gị ase. Ọ bụrụ na ị dị oke mkpa iji nweta ọnụahịa ahụ, biko kpọọ anyị ma ọ bụ gwa anyị na email gị ka anyị wee lebara ajụjụ gị anya.
Q3: Gịnị bụ gị okwu nke mbukota?
A: Osisi osisi, plywood pallet, igbe osisi, katọn bụ maka nhọrọ, dabere na ihe dị iche iche ma ọ bụ ihe ndị ahịa chọrọ.
A: T / T, L / C, D / P, wdg Anyị ga-egosi gị foto nke ngwaahịa na nchịkọta tupu ị kwụọ ụgwọ.
Q5: Gini bu usoro inye gi?
A: EXW, FOB, CFR, CIF. Nwere ike ịhọrọ nke nke bụ ihe kasị adaba ma ọ bụ na-eri irè n'ihi na ị.
Q6: Kedu maka oge nnyefe gị?
A: N'ozuzu, ọ ga-ewe 7 ruo ụbọchị 15 mgbe ị natachara ụgwọ gị. Oge nnyefe akọwapụtara na-adabere na ihe na oke nke usoro gị.
Q7: Gini bu usoro iwu gi?
A: Ihe nlele maka ule gi di, biko kpọtụrụ ndi ahia anyi ka itinye ihe nlere n'efu.
A: 1. Anyị na-ejide ezigbo mma na ọnụ ahịa asọmpi iji hụ na ndị ahịa anyị ritere uru.
2. Anyị na-asọpụrụ ndị ahịa ọ bụla dịka ndị enyi anyị ma anyị ji obi anyị niile na-azụ ahịa ma soro ha nwee enyi, n'agbanyeghị ebe ha si.
Q9: you na-enye ihe eriri USB niile dịka eriri ndị anyị na-emepụta?
A: Ee, anyị nwere ike. Anyị nwere teknụzụ na teknụzụ mmepụta nke na-etinye aka n'ichepụta usoro ihe owuwu iji depụta ihe niile ịchọrọ.
Q10: Gini bu usoro ahia gi?
A: Na-etinye ego n'ọrụ. Inyere ndi ahia aka ịhọrọ otutu ihe kwesiri ekwesi, ichekwa ahia ma melite ogo.
Obere uru mana ntụgharị ọsọ ọsọ: Inyere eriri ndị ahịa aka ịsọ mpi n'ahịa ma mepee ngwa ngwa.
Ejiri Igwe Igwe Igwe
Phosphated Steel Waya N'ihi Optical USB
Phosphated Steel Waya N'ihi ngwa anya USB Ike
Phosphatized Steel Waya
Hot tinye kpaliri Steel Waya maka USB Armoring
Yram Yarn maka Waya na USB, Optical Fiber Cable Bundle
Eriri mesikwuru Plastic (FRP) mkpara maka Optical Fiber USB